आठ सयभन्दा बढी पत्रकारहरु कोरोना संक्रमित छन् - Tarun Khabar
आठ सयभन्दा बढी पत्रकारहरु कोरोना संक्रमित छन्
तरुण खबर ११ जेष्ठ २०७८, मंगलवार ११:२३
रमेश विष्ट, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय कार्यसमिति
नेपाल पत्रकार संघलाई किशोर नेपाल अध्यक्ष हुँदा २०५४ साल भदौ ३० गते सम्पन्न १८औं महाधिवेशनले पहिलोपल्ट संघलाई महासंघको स्वरूपमा बदली दिएको हो । अहिले नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्ष विपुल पोखरेल छन् भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश बिष्ट छन् । आज मैले उपाध्यक्ष विष्टसँग कोभिड–१९ को सन्दर्भमा विभिन्न पाटाबारे कुराकानी गरेको छु । उपाध्यक्ष बिष्टसँग कालिका महतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–
कोरोनाले धेरै पत्रकारहरु संक्रमित भएका छन् भनिन्छ, कतिपयले जागिरबाट हात धुनुपरेको अबस्था पनि छ, यसलाई पत्रकार महासंघले कसरी लिएको छ ?
यो महामारीले आक्रन्त पार्छ भन्ने अनुमान त हामीलाई पहिले पनि थियो । व्यवसायीक रुपमा काम गरिरहेका पत्रकारहरुलाई कोरोनाको निहुँमा अथवा आर्थिक रुपले अप्ठ्यारो परेर पत्रकारहरुले आफ्नो रोजीरोटीबाट हात धुनुपर्ने खतरा आउने आँकलन हामीले गरेका थियौं । सोही अनुसार अहिले पनि पत्रकारहरुलाई विभिन्न सञ्चार गृहहरुले जागिरबाट निकाल्ने र काम गरेको पारिश्रमिक नदिने अबस्था आएको छ । साथै काम गर्ने वातावरण पनि नदिने जस्तो जटिल समस्याहरु नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा देखिएको छ । त्यस्ता समस्याहरु नेपाल पत्रकार महासंघमा केही लिखित र मौखिक रुपमा उजुरी प्राप्त भएका छन् । ती जानकारीका आधारमा नेपाल पत्रकार महासंघले सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठान, एशोसियटहरु सित मौखिक रुपमा कुराकानी गर्ने, पत्राचार गर्ने र दाबाब तथा कानुनी लडाइँ अगाडि बढाउने काम भइरहेको छ । त्यो बाहेक पत्रकारहरुले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सुविधाबाट बञ्चित भएको अवस्था पनि छ ।
पत्रकार महासंघ आफैले पनि कोभिड कोष स्थापना गर्दै छ । आपतकालीन कोषको स्थापना गरिसकिएको छ । कोभिड कोष छुट्टै र आपतकालीन छुट्टै गरेर केही आर्थिक जोहो गरेर दिवंगत पत्रकारका परिवार र पीडित पत्रकारहरुलाई केही राहतको व्यवस्था गर्न लागिपरेका छौं ।
अहिले संक्रमित पत्रकारको संख्या पनि निकै बढी छ । त्योसँगै अहिलेसम्म करिव १५ जना पत्रकारको त दुःखद् निधन नै भइसकेको छ । संक्रमित पत्रकारहरुलाई स्वास्थ्य उपचारमा सुविधा दिएको पनि हामीले पाएका छैनौं । मृतक पत्रकारका परिवारलाई राहत दिएको पनि हामी पाएका छैनौं । नागरिकको लागि आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर खाइनखाई अहोरात्र खटिरहेका पत्रकारहरुलाई राज्यको तर्फबाट जुन किसमको प्रोत्साह र उनीहरुको परिवारका लागि कुनै राहत यो महामारीमा पनि हुन सकेन, यसबाट महासंघ दुःखी छ ।
अहिले कतिजति पत्रकार कोभिड संक्रमित भएका छन् ?
अहिले ८ सयमाथि पत्रकार साथीहरु संक्रमित भइसकेका छन् । ठ्याक्कै यतिनै भनेर त्यस्तो तथ्यांक त आएको छैन । फेरी सबैतिर भयभितको अवस्था छ । सबै संक्रमित साथीहरुले खुलेर भन्न नसकेको अवस्था पनि छ । अहिले देशभर गरेर ८ सयदेखि हजार हाराहारी पत्रकार संक्रमित भएको देखिन्छ ।
महामारी र आर्थिक दुवैतिरबाट पीडित पत्रकारका लागि महासंघले राहत प्याकेजको तयारी गरेको छैन ?
हामीले पत्रकारहरुलाई तत्काल आवश्यक पर्दा आईसोलेसन र होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्था गर्ने केही प्रयासहरु गरेका छौं । तत्काल अति आवश्यक प¥यो भने अक्सिजनको पनि केन्द्रीय कार्यालयमार्पmत व्यवस्था गरेका छौं । केही अत्यन्तै अप्ठ्यारोमा परेका पत्रकारहरुले त्यो अक्सिजन पत्रकार महासंघबाट प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ । त्योसँगसँगै केही अस्पतालहरुमा कुरा गरेर पत्रकारहरुलाई प्राथमिकताका साथ बेड, आइसोलेसन र भ्यान्टिलेटरको व्यवस्था गर्न आग्रह ग–र्यौं । यसरी हामीले थुप्रै पत्रकारहरुलाई बेड, आइसोलेसन र भ्यान्टिलेटरको सहजीकरण गर्ने काम गरेका छौं । अरु जो÷जति पत्रकारहरु पीडित हुनुहुन्छ, उहाँहरुले पनि सम्पर्क गर्नुभयो भने सहयोग गर्न कठिबद्ध छौं ।
नागरिकको लागि आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर खाइनखाई अहोरात्र खटिरहेका पत्रकारहरुलाई राज्यको तर्फबाट जुन किसमको प्रोत्साह र उनीहरुको परिवारका लागि कुनै राहत यो महामारीमा पनि हुन सकेन, यसबाट महासंघ दुःखी छ ।
अर्को हामीले सरकारसँग पत्रकारहरुको स्वास्थ्योपचार र उचित प्रोत्साहन तथा राहतको लागि आउँदो बजेटमा छुट्टै राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छौं । त्यो बाहेक पत्रकार महासंघ आफैले पनि कोभिड कोष स्थापना गर्दै छ । आपतकालीन कोषको स्थापना गरिसकिएको छ । कोभिड कोष छुट्टै र आपतकालीन छुट्टै गरेर केही आर्थिक जोहो गरेर दिवंगत पत्रकारका परिवार र पीडित पत्रकारहरुलाई केही राहतको व्यवस्था गर्न लागिपरेका छौं । त्योसँगसँगै यो बीचमा उपचारमा समस्या परेका साथीहरुलाई केही सहजीकरण गर्ने काम पनि पत्रकार महासंघले गरेको छ । विशेष गरी आर्थिक अवस्था कमजोर भएका संक्रमित पत्रकार र दिवंगत पत्रकार परिवारलाई लक्षित गरेर महासंघबाट केही राहत उपलब्ध गराउने सोच बनाइएको छ ।
कतिपय अस्पतालमा संक्रमित पत्रकार साथीहरुको उपचारका क्रममा यति धेरै विल उठेको छ । त्यो पत्रकार महासंघले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसको लागि अन्य सम्बन्धित निकायहरुलाई पनि गुहार्नुपर्ने अवस्था छ । बिरामी भएर निको हुँदा पनि विल भुक्तानी गर्न नसकेर गुज्रिइरहेको अवस्था छ । यो अत्यन्तै दुःखद् र पीडादायी अवस्था हो । त्यसको लागि सरकार र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर त्यस्ता साथीहरुको सहजीकरणका लागि पत्रकार महासंघ लागिपरेको छ ।
संकटको घडीमा राज्यले पत्रकारलाई केही सहयोग गरेको छैन ?
लकडाउनभन्दा अगाडि हामीले अर्थमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीसँग सम्भावित खतराको विषयमा छलफल गरेका थियौं । उहाँहरुले आगामी बजेटमा केही कुरा समेट्ने आश्वासन दिनुभयो । जब निशेधाज्ञा र संक्रमणको दर देशैभरि फैलियो, त्यसले आमनागरिक र पत्रकारसमेत संक्रमित भएर अस्पतालहरु भरिभराउ हुने अबस्था आयो, अहिले पनि संक्रमण दर र मृत्यु हुने दर कम भएको छैन । यस्तो सम्वेदनशील बेलामा सरकारले पत्रकारहरु जो अग्रभागमा रहेर महामारीको समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका छन्, उनीहरुलाई तत्काल सहयोग गरोस् भन्ने महासंघको माग छ । महासंघ सदस्य साथीहरुले रोग नियन्त्रण र रोकथामको लागि केही हदसम्म जनतालाई सचेत बनाएको छ । यो बेलामा हुने अनियमितताको बारेमा पनि समाचार सम्प्रेषण गरेका छन् ।
अहिले ८ सयमाथि पत्रकार साथीहरु संक्रमित भइसकेका छन्, संक्रमणबाट १५ जना पत्रकारहरुको निधन भएको छ ।
यस्तो अवस्थामा ती अग्रभागमा रहेर काम गरिरहेका पत्रकारहरुलाई राज्यले कुनै सहयोग गरेको छैन । एक प्रकारले भन्ने हो भने यो राज्यले सञ्चार क्षेत्रसँग अत्यन्तै पूर्वाग्रह र अनुदार ढंगले व्यवहार गरेका छ । राज्य पत्रकारिता क्षेत्रप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वबाट पुरै विखुम भएको छ । यी सबै विषयलाई नियाल्दा राज्य पत्रकारिता क्षेत्रप्रति कठोर ढंगबाट प्रस्तुत भएको भन्ने लाग्छ । यो महामारीको बेलामा राज्यले अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्नेमा कुनै प्रकारको सहयोग हौसला नपाउनु अत्यन्तै दुःखदायी कुरा हो ।
दैवीप्रकोप अथा महामारीको बेला नागरिक समक्ष पत्रकारहरुले कस्तो खालको समाचार सम्प्रेषण गर्दा उचित हुने देख्नु हुन्छ ?
चाहे संकटको बेला होस् अथवा सामान्य अवस्था ‘समाचार, जहिले पनि समाचारै’ हुन्छ । तर, संकटको बेलामा आफूले देखेको समाचारले समाजमा अतिरञ्जापूर्ण ढंगबाट नकारात्मक असर नपरोस् भन्ने कुरामा हामीले अत्यन्तै सचेत हुनुपर्छ । बाँकी कुरा अब मृतको संख्या हामीले भन्नै पर्ने हुन्छ । संक्रमितको संख्या पनि भन्नैपर्ने हुन्छ । माहामारीका नाममा भएका सरकारका तथा सम्बन्धित पक्षका अनियमितता लेख्नैपर्ने हुन्छ । मात्रै के हो भने समाजमा अतिरिक्त किसिमको भय, त्रास फैलिने कुरामा चाहीं ध्यान दिनुपर्छ ।
पत्रकारहरुलाई विभिन्न सञ्चार गृहहरुले जागिरबाट निकाल्ने र काम गरेको पारिश्रमिक नदिने अबस्था आएको छ । साथै काम गर्ने वातावरण पनि नदिने जस्तो जटिल समस्याहरु नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा देखिएको छ ।
समाचार सम्प्रोषण गर्दा सकेसम्म सत्य, तथ्यको आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ । यो बेलामा सरकार मात्रै नभएर अन्य सम्बन्धित पक्षले पनि अनियमितता गरेको हुन सक्छ । त्यसैले पत्रकारले अत्यन्तै चनाखो भएर समाचार लेख्नुपर्छ । पत्रकारले जहिले पनि संकटको बेलामा अत्यन्तै सचेत र सजग भएर काम गर्नुपर्छ । संकटको बेलामा पत्रकार आचारसंहिताले मात्रै पनि काम नगर्ने रहेछ । त्यसको लागि हामीले विश्व स्वास्थ्य संगठनले अपनाएको सचेतनालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । नेपाल पत्रकार महासंघले पनि सचेतना अपनाउन आग्रह गरेको छ । पछिल्लो समय केही साथीहरुले समाजमा भयभित हुने, आतंक सिर्जना हुने खालका दृश्य, समाचारहरु सम्प्रोषण गरेको पनि पाइएको छ । महासंघले त्यसो नगर्न आग्रह पनि गरेको छ । यस्तो बेलामा गरेको कामको समाजले पनि नजिकबाट नियालेर मूल्यांकन गर्छ । राज्यले पनि पत्रकारको लागि जिम्मेवारी बोधका साथ काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
कोरोना कहरले आक्रन्त भइरहेको बेलामा प्रधानमन्त्रीले संसदै विघटन गरेर चुनाव घोषणा गर्नुभयो, त्यो अहिलेको आवश्यकता हो र ?
पहिलो कुरा जसरी जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको छ । त्यो प्रक्रिया नै असंवैधानिक छ भन्ने पत्रकार महासंघले ठहर गरेको छ । किन भने संसद्ले वैकल्पिक सरकार दिन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पहिलो पटकको अभिष्ठ पूरा नभएको कुण्ठामा फेरि दोस्रो पटक संसद् विघटन गरिएको छ । संवैधानिक रुपमा यो कार्य आपत्तिजनक छ । किन भने महामारीले जनता आक्रन्त भइरहेका बेलामा संसद् विघटन गरेर देशलाई राज्यविहिनता र अराजकतातिर धेकेलिएको छ । अझै पनि राजनीतिक दलहरुले छलफल गरेर भएका गल्तीहरु सच्याउन बुद्धिमानी हुन्छ । यतिबेला जनताले सामान्य उपचार नपाएर मृत्युवरण गरिरहेको अवस्था छ । अहिले जसरी राजनीतिक रुपमा जुन किसिमको अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसलाई नेपाली नागरिहरुले अत्यन्तै दुःखद् रुपमा लिएका छन् । त्यसको नेपाल पत्रकार महासंघले नजिकबाट नियालेर खबरदारी गर्दछ । नेपालले खोपलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न देशबाट ल्याउने काम गर्नु पर्छ ।
यो सरकार जनताको जीवन रक्षाप्रति ध्यान नदिएर किन अनुदार ढंगले उत्रिएको हो जस्तो लाग्छ ?
उहाँ आफ्नो राजनीति र व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्नु भएको स्पष्टै छ नि । जनताहरु आफ्नो जीवन रक्षाको लागि संघर्ष गरिरहेको बेलामा सरकारबाट हुने यस्ता क्रियाकलपबाट जनताहरु अत्यन्त दुःखी भएका छन् । यसले समग्र व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक सन्देश जान सक्छ । यो कदमले संघीय लोकतान्त्तिक गणतन्त्रमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुने र शासन व्यवस्थाप्रति नै खतरा उत्पन्न हुने देखिएको छ । यो घटनाले अहिलेको व्यवस्था चाहने कसैलाई पनि हित गर्दै छ । यस्तो बेलामा सञ्चारकर्मीहरुले समाचार सम्प्रेषण गर्दा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतालाई ख्याल गरेर जनताको पक्षमा कलम चलाउनुपर्ने हुन्छ । साथै, राजनीतिक घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियाली लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संवैधानिक रुपले अगाडि बढ्न सुझाउनुपर्छ ।